ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဌဒေါက်တာဝင်းသိမ်း နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ၊ ဝယ်လင်တန်မြို့သို့နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံဝန်ထမ်းပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ လေ့လာခရီးစဉ်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (၁၃)ကြိမ်မြောက် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကျင်းပခြင်း
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (၁၃)ကြိမ်မြောက် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၈း၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး၌ ကျင်းပရာ
Screening Test အောင်စာရင်း ရေးဖြေစာမေးပွဲ သတင်း
(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်
၁။ ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အထက(၇) အလုံ စာဖြေဌာနတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်
ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် ဒုတိယအဆင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အထက(၃)နေပြည်တော် စာဖြေဌာနတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်
ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အထက( ၉ )
(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်
ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အထက(၁)မကွေး၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်
ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို
၂၈-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၁၇)၊ နေပြည်တော်၌ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ မိသားစုဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ
Screening Test အောင်စာရင်း သတင်း
၁၆-၆-၂၀၁၈ ရက် (စနေနေ့)တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၈) ဝန်ကြီးဌာန / အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၃၃)နေရာ အတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အောင်မြင်သူများစာရင်း
ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၈) ဝန်ကြီးဌာန / အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၃၃)နေရာ အတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိမ်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသံရုံး မှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိမ်းသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri ဦးဆောင်သော
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိမ်း Japan International Cooperation Agency (JICA) မှ Chief Representative ဖြစ်သူ Mr. Masayuki KARASAWA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိမ်းသည် Japan International Cooperation Agency (JICA) မှ Chief Representative ဖြစ်သူ
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ (Civil Services Academy-CSA)များ၏ တက္ကသိုလ်အကြံပေးအဖွဲ့များ၊ တက္ကသိုလ်ပညာရပ်အဖွဲ့များ ပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃/၂၀၁၈) ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ(Civil Services Academy-CSA)များ၏ တက္ကသိုလ်အကြံပေးအဖွဲ့များ၊